(Sawiro)Shirkii arrimaha Soomaaliya ee Brussels oo la soo gaba gabeey | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta (Sawiro)Shirkii arrimaha Soomaaliya ee Brussels oo la soo gaba gabeey
(Sawiro)Shirkii arrimaha Soomaaliya ee Brussels oo la soo gaba gabeey
Magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium-ka waxaa lagu soo gaba gabeeyay shirka arimaha Soomaaliya, kaasi oo maalmihii lasoo dhaafey ka socdey magaaladaasi.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxda dowladda dhexe oo uu hoggaaminayay Madaxweynaha Soomaaliya, Madaxda maamul goboleedyada, Ururada bulshada raydidka, Ganacsato iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya.
Shirkan wajigiisa Koowaad waxa furay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalka Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa waxaa si aad ah loogaga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin ammaanka, Xalinta khilaafaadka, Ganacsiga Doorashooyinka dalka 2020-ka iyo horumarka dalka.
Shirkan oo wajigiisa labaad maalin kale galay ayaa la soo gaba gebeeyay waxaa shir guddoominayay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), iyada oo Madaxweynaha khudbad uu halkaasi ka jeediyay ku sheegay in Soomaaliya ay abaal u hayso dhammaan qaybaha caalamka ee dowladda kala shaqeeya dhiirrigelinta horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay.
Shirkan ayaa ugu dambeyn waxaa laga soo saaray war-murtiyeed ay isku raacsan yihiin dhammaan madaxdii ka qeyb gashay, iyada oo ujeedadooda ay tahay sidii Soomaaliya ay horey ugu sii socon laheyd.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa si aad ah u soo dhaweeyay shirka lagu qabtay magaalada Brussels, waxayna sheegeen shirka kadib in Soomaaliya ay wax badan iska bedeli doonto, hadii ay ahaan lahaayeen dhaqaalaha iyo amniga.